Fumana ukuphakama kwendlela kuGoogle Earth-Geofumadas
Epreli, 2019 Google umhlaba / imephu
Xa sizobe indlela kuGoogle Earth, kunokwenzeka ukuba ukuphakama kwayo kubonakale kwisicelo. Kodwa xa sikhuphela ifayile, izisa kuphela ulungelelwaniso lobude bayo kunye nobude bayo. Ukuphakama kuhlala kungunothi.
Kule nqaku siza kubona indlela yokongeza kule fayili ukuphakama okufunyenwe kumzekelo wedijithali (srtm) esebenzisa iGoogle Earth.
Dweba umzila kwiGoogle Earth.
Kule meko, ndidweba indlela ephakathi kwamacala amabini apho ndinomdla kwiprofayili.
Bona iphrofayli yokuphakama kwiGoogle Earth.
Ukuzoba iprofayili, chukumisa indlela ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye ukhethe ukhetho «Bonisa iprofayili yokuphakama». Oku kubonisa ipaneli esezantsi apho indawo kunye nokuphakama kuboniswa kwinto xa uskrola.
Khuphela ifayile ye-kml.
Ukukhuphela ifayile, chukumisa kwiqela elisecaleni kunye neqhosha lasekunene leqhosha ukhethe "gcina indawo njenge ...". Kule meko siza kuyibiza «Umzila leza.kml», emva koko sicinezele iqhosha elithi «Gcina».
Ingxaki kukubona le fayile, siyaqonda ukuba iyehla kunye nolungelelwaniso kodwa ngaphandle kokuphakama. Le yifayile ukuba siyibona nge-Excel, jonga ukuba ikholamu ns1: uququzelelo lunoluhlu lwazo zonke iindlela zendlela, kwaye ukuphakama kwayo konke kungunothi.
Ukufumana ukuphakama, siya kusebenzisa inkqubo TCX Converter. Ewe, ngokuvula i-kml yoqobo sinokubona ukuba ukuphakama akukho zero kwikholamu ye-ALT.
Ukufumana ukuphakama, sikhetha ukhetho «Guqula umkhondo», kwiqhosha «Hlaziya ukuphakama». Siza kubona umyalezo othi unxibelelwano lwe-Intanethi luyimfuneko kwaye iindawo eziphakanyisiweyo ziya kuhlaziywa. Kuxhomekeka kwinani lamanqaku isicelo sinokubambeka kodwa emva kwemizuzwana embalwa siyabona ukuba ukuphakama kuhlaziyiwe.
Gcina i-kml ngokuphakama.
Ukugcina i-kml kunye nokuphakama, sikhetha kuphela "Ukuthumela ngaphandle" ithebhu, kwaye ukhethe ukugcina ifayile ye-kml.
Njengoko uyakubona, ngoku ifayile ye-kml ine-altitude yayo.
TCX Converter yinkqubo free ukuthi ngaphandle kokuba uyakwazi ukudibanisa iindlela, unako ngaphandle nje kuphela KML, kodwa iindlela .tcx (Centre Training), -gpx (General eyisebenzisayo ifayile), .plt (Oziexplorer umkhondo PLT fayile), .trk (ifayile CompeGPS), CSV (ubona Excel), .fit (ifayile Garmin) kunye ploar .hrm.
Landa iTCX Converter
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Bentley Systems ikhetha uDkt. Nabil Abou-Rahme njengoMlawuli woPhando
Post Next Dweba amaphulo, imigca kunye neetekisi ze-polygonal ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCADOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Fumana ukuphakama kwendlela kuGoogle Earth"
NgeCawe lonxweme uthi:
I-baixei okanye i-tcx mais nayo iyahlaziya njengoko ukuphakama kuvela m>
okanye ukuba ndimele ndibe feito